Traditional clothes – The Ulwazi Programme
Kumuntu wesifazane kwakuyinto enhle nebukekayo ukuthi ahlale enomzimba omuhle nobukekayo noma ngabe ukwesiphi isigaba sempilo, isibonelo; kungaba umakoti osenomndeni emzini, intombi noma umuntu wesifazane osikhulile. Phela umzimba ngezikhathi zakudala wawuhlala ubonwa yiwo wonke umuntu ngendlela okwakugqokwa ngayo kwemvunulo. Kodwa kukhona izimo ezaziye ziphoqe ukuthi umzimba lona oligugu ushintshe indlela oyiyona. Umzimba ongemuhle wawuthunaza ubuhle nokuzethemba … Read more
Categories Culture Tags Amasiko esintu, Ekhaya, Home, Traditional clothes, Traditional customs
Indlela Yokuhloba Nokushuna
Kunezindlela ezahlukahlukene zokuhloba kwabantu uma beya emaceceni noma emicimbini yesintu. Baye bahlangane baxoxe ukuthi njengoba beya emcimbini othile ngabe kufanele bagqoke kanjani ukuze babukeke kahle kulowomcimbi abasuke beya kuwona. Lokho kuhlangana kwabo bebonisana ngokuthi kufanele bagqokeni bagcina bephume nento eyodwa ababonisana ngayo lokho kuwukushuna. Ukushuna Ukushuna kuwukufaniselana uma niya emcimbini wesintu osuke uzoba sendaweni nibhince … Read more
Categories Culture Tags Imicimbi yesintu, Izinkolelo zesintu, Traditional Ceremonies, Traditional clothes